Madagasikara tamin’iny taona iny – Fizarana fahatelo – · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2010 22:51 GMT
Teo alohaloha teo moa i Lova Rakotomalala no nanoratra ho antsika ny Madagasikara nandritra ireo volana niatombohan'ny taona 2009 izay tonga hatrany amin'ny fanonganam-panjakana nataon'i Andry Rajoelina, Ben'ny tanànan’ Antananarivo teo aloha, ka nahatafakatra azy ho eo amin'ny fitondrana. Narahin'i Mialy tamin'ny volana vitsivitsy manaraka ny fitantarana, izay mbola nahitana hetsi-panoherana, ny ankivy natao tamin-dRajoelina tao amin'ny Firenena Mikambana, ny tanjaky ny median'ny olom-pirenena Malagasy an-tserasera, ary ny nielezan'ilay fako shimika. Eto indray isika dia hiara-mitopy maso aminy amin'ireo zava-nisy nanamarika ny volana farany.
Ny filoha teo aloha Ravalomanana, Ratsiraka ary Zafy ihany no namaly ny fanasana nataon'ny filoha Mozambikana (teo aloha) Joachim Chissano ka nanatrika ny dingana manaraka hifampizara fahefana. Vita hatramin'ny antsipiriany ny fizarana ny andraikitra ambony sy ny minisitera. Tsy nanaiky hanatrika ilay fihaonana Rajoelina ary nambarany ho “mpanongam-panjakana” ireo avy amin'ny antoko mpanohitra tato afara. Ary dia nosakanany ny fiverenan'izy ireo tsy hodiany an-tanindrazana. Tafahitsoka tao Maputo aloha ry zareo, dia tany Johannesburg ihany koa avy eo. Hanoloana ny fifanarahana ary dia nanambara ny hanatontosana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 20 marsa 2010 Rajoelina araka izay notaterin'ny Voice of America:
Nandritra izany fotoana izany dia nesorina tamin'ny toerany ny Praiministry ny marimaritra iraisana tamin'ny volana oktobra, ka nosoloana an'i Cecile Manorohanta, minisitry ny fiarovana tamin'ny andron-d Ravalomanana, ary Praiminisitra vehivavy teto Madagasikara voalohany. Tsy tafapetraka ela anefa ravehivavy fa nosoloin-dRajoelina manamboninahitra miaramila izy andro iray taorian'ny nanendrena azy. Ny Kolonely Vital Albert Camille moa no Praiminisitr'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny BBC:
Avy eo dia nisy nikotrika fikomiana saingy nandamoka izany. Namoaka ny fanambrana navoakan'ireo manamboninahitra lefitra ny Mydago.com. Naka ny sarin'ny toby nisy izany fikomiana izany i Avylavitra .[naotin'ny mpandika teny: sarin'ny hetsika teny Tsimbazaza io araka ny fahalalako azy]
Noesorina tamin'ny AGOA i Madagasikara
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny raha atao teny malagasy hoe “Filazana manjò AGOA” no manoratra i Ndimby:
Nanao hetsika niangavy ny fitondram-panjakana Amerikana ny mpi-Twit mba ho avotana i Madagasikara. Moa ve mety ny manafay ny olo-tsotra izay miasa amin'ny orinasa miankina amin'ny AGOA ary very asa, raha tapaka ny AGOA noho ny fihetsika tsy mifanaraka amin'ny demaokrasia nataon'nympitondra azy?
Amin'io lahatsoratra io ihany no nanontany i Ndimby :
Achille52 naneso ny filazana fa hosoloan'ny teknolojia vaovao ny AGOA :
Nanana fijery hafa kosa i Avylavitra, nitsikera ny fifanarahana iraisam-pirenena sy ny fikambanana izay tonga hamatopatotra [hevitr'i Ismael Razafinarivo avy amin'ny radio Antsiva]:
Nisy vaovao nampalahelo hafa ihany koa. Nindaosin'ny fahafatesana i Jacques Sylla. Jacques Sylla, mpandova fianakaviana nanana ny lazany teo amin'ny sehatry ny politika, dia efa Praiminisitra nandritra ny fitondran'i Marc Ravalomanana, ary lehibena ankolafy nifampiraharaha nandritra ny krizy. Nifindra ho anisan'ny mpanohana an'i Rajoelina izy ay eo ary hita niaraka tamin'i Rajoelina nitaky ny fialan-d Ravalomanana.
Henjana dia henjana ny nitsaran'ny hafa azy, fa ny hevitra mba voalanjalanja dia voasolontenan'i Ndimby, izay nihevitra fa azo itarafana ny fahasarotan'ny politika Malagasy indrindra ny momba an'i Sylla.
Fiononana bitika ihany ao anatin'izao fandrakofan'ny vaovao ratsy izay lazainy mazava amin'ny “annus horribilis” (Mbola i Ndimby ihany) izao ity: Nahombiazana ny fanakanana ny fanondranana ny andramena avy amin'ny faritra arovana Malagasy saingy norobaina ihany noho ny hetsika iraisam-pirenena natao.
Efa hatramin'ny volana Marsa 2009, no nisy nitatitra ny mombaizao fandrobana izao :
Saingy voasakana kosa ity fanondranana iray ity:
Raha tohizana amin'ny vaovao tsara ara-tontolo iainana kosa dia eo ny fandraisana anjaran'i Patrick, avy amin'ny FOKO, tamin'ny alalan'ny lahatsary ny fivorian'ny COP15 sy ny fanentanana mahavelom-bolo nataona ONG avy eto an-toerana iray antsoina hoe Jade.
Vakio ny Tamberin'ny Madagasikara tamin'iny taona iny. Jereo ny Fizarana voalohany sy ny Fizarana faharoa amin'ity andian-dahatsoratra mizara telo ity.